Ko Toe: MY LATEST ILLUSTRATIONS
MY LATEST ILLUSTRATIONS
Animation မကျွမ်းကျင်လို့ Freelance Project တစ်ခု လက်လွှတ်လိုက်ရတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ Adobe Illustrator ကို ဟိုးအရင်ထက် ပိုသုံးမိတယ်။ ကာတွန်းအဖတ်များတဲ့ ဒီ Thai နိုင်ငံမှာ ဂျပန်ကာတွန်း ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေက ပလူလိုပျံနေတော့ ဒီလို မျက်ပြူးကာတွန်း ဇာတ်ကောင်လေးတွေက နေရာအနှံမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် ထိုင်းရောက်ကတည်းက သတိထားမိခဲ့တယ်။ ဒီဇာတ်ကောင်လေးတွေကို ကလေး၊ လူကြီးတွေသာမက ဂျပန်တွေကို မုန်းတဲ့ တရုတ်တွေတောင် ကြိုက်နှစ်သက်တာ အမှန်ပါ။ ဂျပန်ကာတွန်းဆရာတွေကလည်း ကာတွန်းနည်းပညာမှာ တော်တော်လေး အသေးစိတ်ဆန်ပြီး လက်ရာတွေ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တာကို တွေ့ရတယ်။ ဂျပန် နိုင်ငံရဲ့ Packaging Design တွေကလည်း တော်တော်လေးကို Clean Design ဆန်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အားလပ်တဲ့အချိန်မှာ Library ကိုသွားပြီး Japan Archi နဲ့ Design တွေကို ပိုပြီးလေ့လာမိတယ်။ Light Tone တွေ Soft Tone တွေကို မယုံနိုင်လောက်အောင် အဆင့်ဆင့် သုံးတတ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ အနုပညာစွမ်းအားက ကျွန်တော့်ကို မင်သက်စေတာက အမှန်ပါ။
ဒီ မြန်မာဆန်ဆန် နဲ့ မြန်မာမှု့ပြုထားတဲ့ ပုံကတော့ မပြီးသေးပါဘူး။ နောက်က Background များကို ဆက်ဆွဲဖို့လိုပါသေးတယ်။ နောက်နှစ်မှစပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ဟာသ Post များ၊ ကဗျာများ နဲ့ Art တို့ Design တို့ကို myohanhtun.com မှာပဲ Personal Portfolio Blog ဆန်ဆန်ပဲ ရေးပါတော့မယ်။
ဒါနဲ့ မနက်ဖြန်မှာတော့ Project တစ်ခုအတွက် ဂုဏ်ထူးဆောင် Certificate တက်ယူရမယ်လို့ လူကြီးတွေက ပြောတာကြောင့် ... Pirates of the Caribbean ထဲက ဒါးပြတွေ စတိုင်ကို အားကျပြီး ... နှုတ်ခမ်းမွေး မုတ်ဆိတ်မွေး ဘရဗျစ်နဲ့ လူဆိုးကြီး ဂိုက် ဖမ်းထားတဲ့ ကျွန်တော်တစ်ယောက် နှုတ်ခမ်းမွေးတွေ မုတ်ဆိတ်မွေးတွေ ကို ရိတ်လိုက်ရတယ် ဗျာ။
ဒါကတော့ MountMandalay ရဲ့ Version 2008 ဒီဇိုင်းပါ။ အလုပ်တွေနဲ့ စာတွေပိနေတာကြောင့် ရှေ့ဆက်မလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ ဖြေးဖြေးပေါ့။ Mac နဲ့ Apple ရဲ့ Idea တွေ Influence ဖြစ်နေတာကြောင့် ကျွန်တော်ရဲ့ ဒီဇိုင်းအများစုမှာ အဲဒီ က Concept တွေပါနေတတ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုလည်း မဆိုလိုပါဘူး။ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးတွေရဲ့ Idea တွေကို ခိုးတတ်တယ်ဆိုတာက ငြင်းဖွယ် မရှိတာ အမှန်ပါ။ ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်းပေါ့။
ဒီနှစ်မှာတော့ မယုံနိုင်လောက်အောင် အလုပ်တွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အလုပ်ကို မမြင်ရရင် သေမတတ်အောင် စွဲလမ်းလေသလား မသိရိုးအမှန်ပါ ဗျာ။
Address ကတော့ MountMandalay.NET ပါ။
Posted by MYO HAN HTUN at 11:35 AM
တရုတ်ကာတွန်း တော်တော်များများက အဲလို မျက်ပြူးတွေပဲ
ဂျပန်အတုခိုးတာပေါ့.. ထိုင်ဝမ်မှာလဲ ဂျပန်ကာတွန်း
ဘာသာပြန်တွေပဲ.. တစ်ချို့ကာတွန်းတွေ ရုပ်ရှင် ပြန်ရိုက်တဲ့အထိ
နာမည်ကြီးတယ်။ ဥပမာ. ဟိုကား မြန်မာပြည်မှာတောင်
ပြသွားသေးတယ်လေ.. ဇာတ်ဝင်သီချင်းကို ၀ိုင်ဝိုင်းပြန် ကော်ပီဆိုထားတယ်
“စည်း” ဆိုလား..း)
ဂျပန်ကာတွန်း ဇာတ်ကောင်တွေကို အတုခိုးလား မခိုးလားတော့ မသိဘူး .. မနိုင်းနိုင်း .. ရ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့ရှိတယ် .. ကျွန်တော် ထိုင်း ရောက်ခါစက စာအုပ်ဆိုင်တွေသွားကြည့်ရင်း ထိုင်းရုပ်ပြကာတွန်းစာအုပ်တွေကို သတိထားမိတော့ .. ထိုင်း ကာတွန်း လက်ရာတွေက ကောင်းမှကောင်းလို့ ထင်ခဲ့မိတယ်။ ဒါပေမယ့် .. ကိုယ်ထင်သလိုမဟုတ်ခဲ့ဘူး ဗျာ။ သူတို့က ဂျပန်ကာတွန်းစာအုပ် တစ်ခုလုံးကို ဂျပန်စာတွေ နေရာမှာ ထိုင်းစာလုံးတွေ ပြောင်းထည့်လိုက်တာပဲ။
ရုပ်ရှင်တို့ တီဗီတို့ ဗီဒီယိုတို့ကို အကြည့်နည်းတဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်ကတော့ ဘာဇာတ်ကားပြောပြော သိမှာမဟုတ်ပါဘူး .. ဗျာ။ ကျွန်တော်က အဲဒီလောက်ကို တောကျလှတယ်။
လက်ရာလေးတွေ ရေရေလယ်လယ်သန့်တယ်ဗျာ သဘောကျတယ် အရမ်းပဲ။ ဆက်လုပ်ဗျာ။ အားပေးနေတယ်။
I am longing for the one who can create Myanmar cartoon movies for our generation... Cheers Bro!!!
GERRARD .. MY AUTOBIOGRAPHY
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဟာသများ (၂)
ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဟာသများ (၁)